Ithegi: usetyenziso lwe-iphone | Martech Zone
Ithegi: usetyenziso lwe-iphone
NgoLwesibini, Oktobha 27, 2015 NgoLwesibini, Oktobha 27, 2015 Douglas Karr
Abathengisi bayaziwa ngokungadibanisi imisebenzi kwiCRM yenkampani. Umsebenzi wokuloga kwenqanaba unokuba sezantsi njenge-20%, ekhokelela kuqikelelo lwentengiso olwenziwe ngokusekwe kuloo datha ukuba icinywe ngama-80%. I-LIID ijongana nale ngxaki ngesicelo se-smartphone esinika i-reps yokungena kwedatha ngokuzenzekelayo kunye nezixhobo zokwenza ubomi bube lula njengokukhangelwa kwekhadi leshishini kunye namanqaku entetho-ukuya-kwitekisi. Inkqubo ye-LIID yeselfowuni ikwasebenza njengomncedisi wentengiso, ekhumbuza abahlaziyi
Izicelo ezisemthethweni zikaGoogle zoVavanyo lwe-iPhone kunye noGoogle zoVavanyo lwesoftware zikhutshiwe ukuze ukwazi ukufikelela kuyo yonke iGoogle Analytics iwebhu kunye nedatha yeapp kwi-iPhone yakho. Insiza iquka neengxelo zexesha langempela. Uhlelo lokusebenza lwandisa ingxelo yokuHlalwa kukaGoogle kunye nolawulo lwendawo ehambayo, ukuze ufumane olona lwazi lubalaseleyo nokuba usebenzisa siphi isixhobo. Umzekelo, iapps ihlengahlengisa ngokuzenzekelayo isibonisi ukuze ilingane isikrini sakho
NgoLwesithathu, Meyi 1, 2013 NgoMvulo, Juni 8, 2015 Douglas Karr
Iqela elimangalisayo ePostano liyenzile kwakhona, lagqitha konke endikulindeleyo kwesicelo esikhulu seselfowuni kunye nohlobo 3 lweMartech. Ndiyakholelwa ukuba yeyona App yeNtengiso ye-iPhone ilungileyo phaya (ukuza kwe-Android)! Okokuqala kukuphinda kwenziwe uyilo olucekeceke olubandakanya ukuhambisa ngasekhohlo okungathi yi-Facebook. Kwenza kube lula ukuskrolela kwaye ukhethe udidi okanye imithombo yeendaba ongathanda ukuya kuyo-kubandakanya iiPodcasts zethu, iiVidiyo kunye neMisitho- ngelixa
NgeCawa, nge-27 kaJanuwari 2013 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
I-App Press yaphuhliswa ukuvala umsantsa wolwazi phakathi kwabaqulunqi bemizobo kunye nabaphuhlisi. Njengoyilo, umseki uGrant Glas wayefuna ukwakha usetyenziso lweekhowudi simahla. Njengomphuhlisi, uKevin Smith wabhala isisombululo. Benze ii -apps ezingama-32 zisebenzisa inguqulelo yokuqala yeApp App kwaye ukusukela oko, 3,000+ abasebenzisi benze iiapps kwiqonga labo. I-App Press yenzelwe ukuba ijongeke njenge-Photoshop kunye nokusebenza njenge-Keynote. Oku kuvumela nawuphi na umyili ukuba atsibe